I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Manuela&Eric
Le ndawo yokuhlala yamaholide iyindawo ekahle yokuphumula ebhishi yabashadikazi noma imindeni emincane. Woza ujabulele ukushona kwelanga okumangalisayo, ubukele amahlengethwa, i-snorkel, i-kayak futhi uphakele izinhlanzi onqenqemeni lwamanzi lwale ndawo engaphambili yolwandle ekhethekile.
Akhiwe endaweni efanayo amanye amayunithi amabili. Iyunithi ngayinye ilungiselelwe ukunikeza indawo yokuhlala yangasese ephezulu enedekhi yangasese, ikhishi, igumbi lokulala kanye nezindawo ze-BBQing. Kubekwe phezu kwendawo indawo yokuphumula nezindawo zokuhlala ezihlukile ukuze uphumule futhi ujabulele indawo ekuzungezile. I-Kayaking, ama-lifejackets kanye nempahla ye-snorkelling, nezindawo zokuwasha kuyatholakala ukuthi usetshenziswe ngaphandle kwenkokhiso eyengeziwe futhi indawo yokupaka yamahhala inikezwa khona kanye endaweni. Ebangeni eliseduze lokuhamba kune-Merizo Pier, indawo enhle yokujoyina abantu bendawo bebhukuda nokuzijabulisa. Okufinyelelekayo futhi izingosi zomlando ezifana ne-Fort Soladad, i-Faha Caves nohambo olujabulisayo lokuya kuma-Priest Pools noma phezulu e-Geus River.
4.81 ·237 okushiwo abanye
4.81 · 237 okushiwo abanye
I-Merizo iyisiqhingi sase-quintessential esinemigwaqo ethule kanye nabantu bendawo abanobungane. Ugu aluthuthukisiwe kakhulu futhi amagquma awanalutho futhi aluhlaza :) Akhiwe cishe imizuzu engama-45-60 ukusuka esikhumulweni sezindiza saseGuam.
URoisin nomndeni wakhe behlala eSouthern Guam iminyaka eminingana futhi bangasiza izivakashi ngezidingo zabo zeholide noma baphendule imibuzo njengoba iphakama.
UManuela&Eric Ungumbungazi ovelele